बाइडनको शानदार विजय सम्बोधन, विश्वलाई नयाँ सन्देश, विजय उत्सव मनाउँन लाखौँ अमेरिकी सडकमा ! - Public 24Khabar
Home News बाइडनको शानदार विजय सम्बोधन, विश्वलाई नयाँ सन्देश, विजय उत्सव मनाउँन लाखौँ अमेरिकी...
बाइडनको शानदार विजय सम्बोधन, विश्वलाई नयाँ सन्देश, विजय उत्सव मनाउँन लाखौँ अमेरिकी सडकमा !
पार्टीभित्र अल्पमतको सामना गरिरहेका ओलीले लगातार आन्तरिक समिकरण फेरबदलको कोसिस जारी राखेका छन् । त्यसअगाडि साउन ९ मा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नेता नेपालसँग छलफल गरेका थिए । पार्टीभित्र आफूमाथि दबाब बढ्दा ओलीले वरिष्ठ नेताहरुसँग छुट्टाछुट्टै पनि भेट गर्दै आएका छन् ।
Previous article६ महीनाको पेटको बच्चा स्वी*कार्दैन भन्दै फरार…म’र भन्दै वी’ष खुवाएर भाग्यो, हेर्नुस्
Next article२० वर्षकि चेलीलाइ उनकै श्रीमान् र सासु मिलेर…अन्तत् पुजा बैनी मिडियामा बास्त*बिकता यस्तो ।